Fepetra takiana amin'ny singa sy singa amin'ny milina - Dongguan Tuoyuan Precision Machines Co. LTD.
Fepetra ara-teknika ho an'ny faritra sy ny masinina
Ny fizotry ny fanodinana ny ampahany dia ny fanovana mivantana ny fisehoan'ny akora mba hahatonga azy ireo vokatra semi-vita na vita. Ity dingana ity dia antsoina hoe fizotran'ny teknolojia. Io no mari-pahaizana ho an'ny fanodinana faritra sy fanodinana faritra mekanika. Sarotra kokoa ny fizotrany.
Ny mari-pahaizana momba ny fizotran'ny masinina dia azo zaraina ho sokajy arakaraka ny fizotrany samihafa: fanariana, fametahana, fametahana, fametahana, fitsaboana hafanana, fametahana, fivoriambe, sns. dingana. Ny hafa toa ny fanadiovana, ny fizahana, ny fikojakojana ny fitaovana, ny tombo-kasen-tsolika, sns. Ny fomba fanodinana dia manova ny toetran'ny akora na vokatra vita semi-vita. Ny fizotry ny machining CNC ao amin'ny indostria no tena dingana lehibe.
Fanodinana kontour ny ampahany
1. Ny fandeferana endrika tsy misy marika dia tokony mahafeno ny fepetra takian'ny GB1184-80.
2. Ny fiviliana azo ekena amin'ny refy halavany tsy misy marika dia ± 0.5mm.
3. Tsy misy tadin'ny R5.
4. Ny chamfers rehetra tsy feno dia C2.
5. Ny zoro maranitra dia manintona.
6. Maizina ny sisiny maranitra, ary esorina ilay burr sy flash.
Fitsaboana ambonin'ny faritra
1. Tsy tokony hisy ratra, hadin-koditra ary kilema hafa manimba ny velaran'ny faritra.
2. Ny ambonin'ilay kofehy voahodina dia tsy mahazo manana kilema toy ny hoditra mainty, vongan-kazo, bokotra tampoka ary burr Alohan'ny handokoana ny velaran'ny faritra vy rehetra izay mila hosodoko, harafesina, refy oxyde, menaka, vovoka, tany, sira ary loto dia tsy maintsy esorina.
3. Alohan'ny fanesorana ny harafesina dia ampiasao solvent organika, lye, emulsifier, etona sns mba hanesorana menaka sy loto eo ambonin'ny faritra vy.
4. Ny elanelam-potoana misy eo anelanelan'ny tampon-kavoana dia hosaronan'ny tifitra variraraka na fanodinana ny tanana ary ny firakotra voalohany dia tsy tokony hihoatra ny 6h.
5. Ny velaran'ny faritra riveting mifandray amin'ny tsirairay dia tsy maintsy hosodokoina amin'ny loko anti-harafesina amin'ny hateviny 30-40Î¼m alohan'ny hampifandraisana azy. Ny fefy eo am-pofoana dia tokony hofehezina amin'ny loko, na putty na adhesive. Ny primer simba amin'ny fanodinana na welding dia tsy maintsy hosodoko.
Ny safidy ny fitaovana dia tokony ho antonony sy marina ihany koa. Ny fikororohana dia tokony hatao amin'ny fitaovana milina matanjaka, satria ny tena tanjony dia ny fanapahana ny ankamaroan'ny karama fametahana milina, ary ny fepetra takiana amin'ny marina dia tsy dia avo loatra. Na izany aza, ho an'ny fanodinana tsara dia takiana amin'ny fikarakarana ny milina avo lenta. Ny safidy milina azo ampiasaina amin'ny milina dia tsy vitan'ny miantoka ny maha-marina ny fikarakarana azy, fa manitatra ihany koa ny androm-piainan'ny masinina.
Ny benchmarks ho an'ny fizotran'ny fizarana mekanika dia misy ny mari-pahaizana fametrahana, izay ampiasain'ny lathes na fixtures rehefa milina amin'ny lathe CNC. Fepetra fandrefesana, ity benchmark ity matetika dia manondro ny habe na ny toerana misy azy izay mila jerena mandritra ny fizahana. Assembly datum, ity datum ity dia matetika manondro ny fenitry ny toerana mandritra ny fizotry ny fivoriambe.
Ny fanodinana ampahany amin'ny masinina dia tsy maintsy mahalala zavatra